Siyaasiyiin reer Puntland ah oo soo saaray: BAAQ & TALO-SOO-JEEDIN | SAHAN ONLINE
Siyaasiyiin reer Puntland ah oo soo saaray: BAAQ & TALO-SOO-JEEDIN
Annagoo ah siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad ka soo jeeda Puntland, ee xubin ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliyeed, xilal muhiim ahna ka soo qabtey J. Federaalka Soomaaliyeed iyo Puntlandba waxaan soo jeedineynaa baaqa soo socota:
1. Waxaan soo dhoweyneynaa socdaalka uu ku yimid Puntland Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan aaminsanahay in ay ku soo aadey xilli muhiim u ah Somaaliya guud ahaan iyo Puntland gaar ahaanba.
Waxaan u rajeyneynaa Madaaxweynaha iyo madaxda qaranka ee la socota safar kheyr leh.
Waxaan leenahay Madaxweyne ku soo dhowoow dalkaaga iyo deegaankaaga.
2. Waxaan shacab-weynaha Puntland uga mahad-celineynaa sida mugga leh ee ay isugu diyaariyeen soo dhoweynta Madaxweynaha Qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaan ka digeynaa in booqashada Madaxweynaha Soomaaliya loo adeegsado olole siyaasadeed iyo mid doorasho.
3. Waxaan bogaadinayaa soona dhawaynaynaa heeshiiskii nabadeed ee dhexmaray labada beelood oo walaalalaha ee dagaalku ku dhexmaray degaanka Qooriileey.
4. Waxaan xusuusineynaa shacab-weynaha Puntland in maalinta 8da Janaayo ay tahay maalin 5tii sannaba mar la doorto Madaxweyne iyo Madaxweyne-ku-xigeen, sidaas darted, ay mudnaanta leedahay maalintii doorasho jirto oo kaliya. Waxayse Puntland u dabaal-degtaa aasaaskeedii oo ah 01da Agosto sannad walba.
5. Waxaan xasuusineynaa Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la doortey 4 sanno ka hor (08 dii Janaayo 2014)ay ugu muhiimsaneyd ballan-qaadkii in uu Puntland gaarsiiyo doorasho Hal Qof iyo Cod (one-man-one-vote), isagoo la rabay in shaqadaas u hawl-galo laga bilaabo maalintii la doortey.
Isagoo Madaxweyne Gaas ku celceliyey marar badan in uu ku fashilmay hogaaminta haddii uusan ku guuleysan himiladaas shacabka Puntland mudnaanta kuwaad u leh.
6. Nasiibdaroo, Waxaa caado noqotey in Madaxweyne kasta marka ay xilkiisa uga dhiman tahay hal sano inuu isku dayo in uu xukunka kororsado, isagoo ku andacoonaya hawlo-qabyo ah iyo fulinta barnaamijka xisbiyaddda badan.
Sidaa awgeed, Waxaan Madaxweyne Gaas waxaan uga digeynaa in uu ku fekero in uu isku dayo muddo kororsi, kaasoo sharcidarro ah, Puntland u horseedaya xiisad siyaasadeed, iska-hor-imaad iyo degenaansho la’aan.
7. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Puntland in ay ilaashadaan dawladnnimada, nabadda iyo kala dambaynta.
8. Ugu danbeyn, waxaan shacab-weynaha Puntland u rejeyneynaa guul, amni iyo maamul wanaagsan oo wax ka qabta caqabadaha badan ee manta horyaala Puntland sida Amnidarrada, Musuq-maasuqa, ku-tagrifalka hantida shacabka, sicir-bararka, daabacaada lacagta Faalsada ah, ballan-ka-baxa ballanqaadyaddii xakuumadda, baabi’inta sarreynta sharciga iyo ku tumashada dastuurka dalka.
Waxaa saxiixey baaqaan:
Janaraal Cabdullahi Ilka-jiir (Wasiir- hore Puntland & JFS)
Xaaji Maxamed Yaasiin (Siyaasi & Musharrax-hore)
Cali Xaaji Warsame (Wasiir-hore Puntland & Musharrax-hore)
Duuliye-sare Khaliif Ciise Mudan ( Wasiir-hore Puntland)
Siciid Cabdullahi Deni (Wasiir-hore JFS)
Dr Maxamed Salaad (Dakhtar iyo Aqoonyahan)